Soomaaliya: Ma jirin oggolaasho ay madaxda Kenya u haysteen in ay tagaan Kismaayo – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Soomaaliya: Ma jirin oggolaasho ay madaxda Kenya u haysteen in ay tagaan Kismaayo
Wasiirka warfaafinta Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) oo BBC-da la hadlay ayaa beeniyay in Dowlada Soomaaliya ay ogeyd in wafdigii Kenya ee ka qeybgalay caleemo-saarkii Axmed Madoobe ee Kismaayo.
Xoghayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya, Macharia Kamau, ayaa sheegay in diyaaradda sidday wafdiga aysan ahayn mid Kenya laga leeyahay oo ay ahayd mid Soomaaliya laga leeyahay, sidaas daraadeedna aysan Kenya sameyn “wax khalad ah”.
”Dadka Kenya ee jooga Soomaaliya oo ay ka mid yihiin kuwii dhawaan halkaas u tegay sidii ay ugu dabbaaldegi lahaayeen guusha doorashadii xorta iyo xalaalsha ahayd ee sida nabdoon uga qabsoontay Jubaland, waxay halkaas ku joogeen aqoonsi iyo oggolaansho ay ka heysteen dowladda Soomaaliya,” ayuu yiri xoghayaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya.
“Qasab kuma aysan tegin halkaas, dowladda Soomaaliya si buuxda ayay uga warheysay”, ayuu hadalka ku sii daray Macharia Kamua oo BBC la hadlay.
Diyaaradda ay Kenya sheegtay in Soomaaliya laga leeyahay, ayuu wasiirku sheegay in cidda diyaaradda saarneyd ay tahay “kuwa ay iyagu haystaan balse aysan diyaaradda ahayn.
Wuxuu yiri Maareeye: “Madaxdii diyaaradda saarneyd ma jirin wax oggolaansho ah oo ay ka haysteen Soomaaliya, iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo ay dalka ku galaan.”
Wafdigii ka socday Kenya ee ka qeybgalay caleemasaarka madaxweynaha Jubaland, Axmed Maxamed Islaam, waxaa hoggaaminayay Aadan Barre Ducaale oo ah hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya iyo Sanetar Yuusuf Xaaji oo laga soo doorto Gaarisa.
Labada dal waxa u dhexeeya khilaaf muddo soo jiitamayay oo ka dhashay muranka xuduudda badda. Kisskaas oo Soomaliya ay u gudbisay Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda (ICJ) waxa la dhageysan doonaa bisha June ee sannadka soo socda.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) oo ka hadlay arrintaas iyo khilaafka ka dhashay wuxuu sheegay in Soomaaliya ay ilalineyso xiriirka labada dal.
“Arrinta badda nidaam maxkamadeed ayay ku jirtaa, maxkamadda ayaa dib u dhigtay, laakiin annaga mowqifkeennii ahaa in maxkamad lagu kala baxo waxba iskama beddelin, ma jiro wax wada hadal ah oo aan ka qeyb galeyno. Mowqifka dowladdana waa cad yahay.” Ayuu yiri wasiirka.
Xoghayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya, Macharia Kamau, ayaa dhankiisa sheegay in hadda, xiriirka labada dal uu wanaagsan yahay, inkastoo ay jeclaan lahaayeen in arrinta badda lagu xalliyo meel ka baxsan maxkamadda caddaaladda adduunka ee ICJ.
Previous Wiil uu dhalay Eng Yariisow oo loo magacaabay Xoghayaha 1aad ee Ergada Somalia ee New York
Next Madaxweynaha Somaliland oo Magacaabay Taliyaha Iyo Taliye Ku-xigeenka Cusub ee Ciidanka Booliska